गैर आवासीय नेपाली संघले काठमाडौको ४ ठाउँमा सुविधा सम्पन्न शौचालय बनाउने – WASHKhabar
गैर आवासीय नेपाली संघले काठमाडौको ४ ठाउँमा सुविधा सम्पन्न शौचालय बनाउने
२४ माघ २०७६, शुक्रबार ११:५२ 190 पटक हेरिएको
काठमाडौ : काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा नं. १४ कलंकी, वडा नंं. ३२ कोटेश्वर, वडा नं. ७ चावहिल र वडा ३ महाराजगञ्जमा सुबिधासम्पन्न सार्वजनिक शौचालय निर्माण हुने भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका र गैर आवासीय नेपाली संघ बीच महानगरको ४ ठाउँमा आधुनिक र सुबिधा सम्पन्न सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरी ५ बर्ष भित्र सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएको हो ।
विहीबार सम्पन्न सम्झौतामा महानगरका तर्फबाट सहसचिव राजेश्वर ज्ञवाली र संघका तर्फबाट कार्यकारी अधिकृत हेमन्तकुमार दवाडीले हस्ताक्षर गर्नुभयो । सम्झौता गर्नु अघि संघले शौचालय निर्माण गर्न सम्भावित ठाउँहरु कलंकी, बालाजु, राष्ट्रपति कार्यालयको अघिल्तिर, जयबागेश्वरी सिफल चौर, कोटेश्वर र स्वयम्भू परिक्रमा मार्गको अध्ययन गरेको थियो । अध्ययन गरिएका स्थानहरुमा शौचालय निर्माण गर्न सम्भावना भएपछि दुवै पक्ष निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण गर्न सहमत भएपछि सम्झौता गरिएको हो ।
निर्माण गरिएका शौचालय सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति तथा व्यवस्थापकीय काम संघले गर्नेछ । ती शौचालय सञ्चालन गर्दा महानगरले तोकेको शुल्क लिइनेछ । यसरी संकलन भएको शुल्कबाट व्यवस्थापन र मर्मत सम्भारको काम गरिसकेपछि बाँकी पैसा थप शौचालय निर्माणका लागि खर्च हुनेछ ।
सम्झौताको कार्यान्वयन कलंकी र कोटेश्वरमा शौचालय निर्माण गरेर अघि बढाइने संघले जनाएको छ । संघले अघि सारेको प्रस्ताव अनुसार कलंकीमा निर्माण हुने शौचालय ४० फिट लम्बाइ र १६ फिट चौडाइको हुनेछ । यसभित्र पुरुषका लागि पिसाब फेर्ने ३ वटा युरिनल र २ वटा शौचालय हुनेछन् ।त्यस्तै महिलाका लागि ४ वटा र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि एउटा शौचालय हुनेछ । त्यस्तै कोटेश्वरमा पुरुषका लागि ७ वटा युरिनल र २ वटा शौचालय हुनेछन् भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि १ वटा र महिलाका लागि ६ वटा शौचालय बनाइनेछन् ।
महिला शौचालयमा स्यानिटरी प्याड व्यवस्थापन गर्न मिल्ने सुविधा हुनेछ । प्याडलाई बाष्पिकरण गरेर जोखिममुक्त बनाउने प्रबिधि जडान हुनेछ । त्यस्तै बच्चालाई प्याड फेराउने र स्तनपान गराउने ठाउँको पनि प्रबन्ध हुनेछ । प्रति घण्टा १ सय व्यक्तिले प्रयोग गर्ने आँकलन गरी यस प्रकारको शौचालयको ढाँचा अघि सारिएको हो । यी शौचालय निर्माण गरिसकेपछि बाँकी २ स्थानमा निर्माण कार्य अघि बढाइने संघका कार्यकारी अधिकृत दवाडीले जानकारी दिनुभयो ।
फोटो : काठमाडौ अनलाइनबाट ।